Nandeha ny fitsaràna ireo izay voarohirohy teo anivon’ny fitsaràna ady heloka ary roa lahy no nahazo ny sazy izay voalaza. Ny atidoha nikotrika kosa dia mbola tafatsoaka rehefa nomena fahafahana vonjimaika. Namoahana didy fampisamborana avy hatrany izy nandritry ny fotoam-pitsaràna.
Misesy ny hain-trano eto an-drenivohitra. Omaly fotsiny dia efa trano telo no kilan’ny afo teto Antananarivo. Saika nitovy avokoa ny anton’ny firehetana dia ny fifampikasohan’ny herinaratra izany. Nisy aza ny zazakely irery no tao an-trano tamin’ny fotoanan’ny firehetan’ny trano. Soa fa mba haingana ny manodidina no nahatsikaritra izany ary nanao izay ho afany tamin’ny fanaovana ny olona sy ny trano. Tonga ihany ny mpamonjy voina izay sahirana amin’ny fitohanan’ny fifamoivoizana.
AMPAMOAKA TONGA PAPA
Marobe ny olona izay nisafidy ny fahatongavan’ny Papa Ray Masina mba hanehoana hevitra sy hamoahana ny marina misy eto amin’ny firenena. Ireo mpiaro ny zon’olombelona no tena nanararaotra izany fandalovany izany mba hitenenana izay tsy mety eto amintsika. Isan’izany ny fianakaviana izay manana ny havany nogadraina mandram-pahafaty rehefa voarohirohy tamin’ny tondromolotra fa nanatontosa ny fonenan’ny masera ao Antsahatanteraka, Andranomanelatra-Antsirabe2. Nilaza ireo fa ny katolika mihitsy no manao tsindry bokotra ka nahatonga ny fitsaràna hanaonao foana.
Niova tamin’ny ora farany indray ny fepetra raisina momba ny fiarovana ny Papa François. Rehefa nihaona tamin’nyArseveka Katolika ny lohandohan’ny mpisorona eo anivon’ny fiarovam-pirenena sy ny mpitandro ny filaminana dia tapaka fa afaka ny mandeha eny amin’ny arabe indray ny olona ary mahita mivantana ny Papa. Teo anefa dia tsy afaka ny miditra na aiza na aiza ny olona ary fenoina mpitandro ny filaminana izay handalovan’ny Papa. Na izany aza anefa dia tsy miova ny isan’ny mpitandro ny filaminana hanara-maso sy hiaro ny Papa.
ANGIDIMBY HITONDRA NY PAPA
Niova koa ny toerana hipetrahan’ny angidimby izay hipetrahan’ny Papa ray masina. Nisy fanapahan-kevitra maro arak’izany niova araka ny fanirian’ny mpiambina manokana ity lehiben’ny Fiangonana Katolika ity ka noraisin’ny mpitandro ny filaminana malagasy an-tànana. Midika izany fa tsy ataon’ny olona kinanga mihitsy ny fiambenana sy fiarovana ny ain’ny Papa François. Indraindray aza dia toa lasa fandrahonana indray no mitranga amin’ny serasera izay ataon’ny tompon’andraikitry ny filaminana.
MPANAO GAZETY ZOKIOLONA
Hahazo trano fivoriana ny fikambanan’ny mpanao gazety zokiolona araka ny fanirian’izy ireo ka nampitany tamin’ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina. Torak’izany koa, nilaza ny minisitra mpiahy ny hijery manokana ireo mpikambana amin’izay mety ho azony hanampiana ara-bola. Izany dia noho ny filazan’ireo zokiolona tsy ampihambahambana fa tena sahirana izy ireo ary mahantra kanefa ny fiainan’izy ireo iray manontolo dia natokany ho an’ny asa fanaovan-gazety.
Rongony folo taonina mahery no sarona tao Antsohihy ary notaterina tamin’ny gony marobe. Nisy olona nanome vaovao ny zandary ary hita tokoa ny fisian’ireo zava-mahadomelina izay saika haondrana any amin’ny faritra avaratra ny ampahany ary alefa aty an-drenivohitra ny ambiny. Raha ny zava-misy dia tena bizina lehibe tokoa ary misy tambajotra matanjaka amin’ny resaka voly sy varotra rongony eto amintsika.